Manjaro 21.0.7, nyowani yakagadzikana vhezheni yeiyo inoshanda system | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 21.0.7, nyowani yakagadzikana vhezheni iyo inogona kukonzeresa matambudziko kana uchigadzirisa kubva kune iyo terminal
Achangopfuura maawa makumi maviri nemana apfuura, timu yekuvandudza kuseri kweichi chakakurumbira Arch Linux-yakaparadzirwa kuzivisa kuburitswa kweshanduro itsva yakagadzikana. Iyo sisitimu ine Rolling Release modhi yekuvandudza, zvinoreva kuti yakaiswa kamwe uye zvigadziriso zvinogamuchirwa zvehupenyu hwese, uyezve kuti vanotangisa maviri sarudzo: ese iwo mapakeji nyowani sekuvandudzwa yevashandisi varipo uye zvaive nguva ino Manjaro 21.0.7 yezero kuiswa.
Haisi nguva yekutanga vhezheni nyowani kuziviswa isati yasvika kuchikwata changu, icho chingangotsanangurwa nekuburitswa zvishoma nezvishoma kuitira kuti zvisarase maseva. Payakatobvumidza ini kumutsiridza, ndakafunga kuti yaive zano rakanaka kuzviita kubva kuchiteshi, asi ini ndakaona bug yekutsamira yaifanira kugadziriswa nemaoko. Sezvo Pamac akazvigadzirisira ini ndega, ini handina kuzvipa zvakanyanya kukosha, asi kune vashandisi vakave nematambudziko, sezvatinoona mu shinda iyi kubva kuhurukuro yepamutemo.
Pfungwa dzeManjaro 21.0.7
Asi tisati tataura nezvematambudziko, ngatitaurei nezvazvo nhau. Vashandisi veGNOME vachatofanira kumirira kwenguva yakareba kuti vashandise GNOME 40, uye iyo yeKDE ichafanirwawo kuva nemoyo murefu kana tichida kushandisa Plasma 5.22. Kune vamwe vese, timu yekuvandudza inosimbisa zvinotevera:
Mazhinji emeso akagadziridzwa, yazvino vhezheni yakagadzikana iri Linux 5.12.9-1-Manjaro.
Systemd ikozvino pa248.3 15. Ivo vanosimbisa kuti dzino dzakateedzana hadzitangi linux49 kana linux419.
Gnome Apps yakagadziridzwa kuenda ku40.2, asi iyo yeGNOME edition inoramba iine 3.38 muShell.
Cutefish DE yakagadziridzwa kuve v0.2.
Pipewire iri pa0.3.30.
Deepin ine zvimwe zvitsva.
Zvimwe zvinogara zvichigadziriswa, zvinosanganisira python uye haskell
Nezvataurwa pamusoro apa, pane dambudziko rinogona kuvapo kune vashandisi varipo iro rakagadziriswa kugadzirisa kubva kuPamac uye kubvuma shanduko dzaunokurudzira. Zvimwe zvinhu zvinogona kuitwa ndezvekubvisa nemaoko mapakeji anopesana neatsva uye edza kukwidzirazve kana kushandisa kernel yekare, asi uchichengeta mundangariro izvo zvinotaurwa mune runyorwa rwezvinhu zvitsva zviri pamusoro.
Manjaro 21.0.7 inowanikwa kwemaawa asingasviki makumi maviri nemana, kuitira kuti vashandisi varipo vagone kugadzirisa kubva kune imwecheteyo sisitimu yekushandisa uye nekuisa nyowani kwatova nemufananidzo mutsva pane peji re kurodha muchirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 21.0.7, nyowani yakagadzikana vhezheni iyo inogona kukonzeresa matambudziko kana uchigadzirisa kubva kune iyo terminal
Ndakaisa Manjaro pakombuta yandaive ndichangotenga uye yainakidza, zvinoshamisa, uye ini ndinoda iyo terminal neiyo yakanyatsogadziriswa zsh uye inosanganisirwa mune huru theme. Iyo zvakare inoshandisa mashoma mashoma zviwanikwa. Iyo komputa inongotanga, iyo inongobata 800 megabytes ekurangarira, ichienzaniswa ne1.3 kana 1.5 yeUbuntu (Gnome nharaunda).
Zvisinei, mufaro mutsime. Izvo zvakangondipa dambudziko. Iyo system yakaomesa yega 2 × 3. Ndakaedza kudzoreredza, ndichigadzirisa iyo systemctl zvikanganiso (pakanga paine zvikanganiso), nezvimwe. Njodzi, ndanga ndave kutoda kudzorera komputa. Ini ndakagadza Fedora uye kusvika nhasi pasina kana dambudziko.
Zvinonyadzisa; sezvandataura, Manjaro runako.
Mukuru wekuchengetedza weCinnamon edition yeDebian inoenda ku KDE